Tantara · Oktobra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Tantara · Oktobra, 2011
Tantara mikasika ny Tantara tamin'ny Oktobra, 2011
Fahalalahàna miteny19 Oktobra 2011
Tato ho ato, ary volana maro izay, tsy maintsy ahitana resaka fifindra-monina na mihodinkodina eo amin'izany ny foto-dresaka teo amin'ny tontolon'ny aterineto Rosiana. Lahatsoratra matanjaka maro tanaty bilaogy nosoratanà olona avy amin'ny vondrona sosialy maro samihafa no lasa sehatra hanehoan'ny tsirairay ny toerana raisiny momba ny anio dy ny ampitson'ny...
Mankalaza ny Faha-roanjato Taonany i Orogoay
Amerika Latina14 Oktobra 2011
Amin'ity taona ity Orogoay dia mankalaza ny faha-roanjato taonan'ny "dingana ho amin'ny fahaleovantenany". Misy ireo hetsika hahatsiahivana ny fiandohan'ny tolona ho an'ny fahaleovantenan'ny firenena nokarakaraina mandritra ny taona, nefa tamin'ny Alatsinainy 10 Oktobra dia nisy ny hetsi-bahoaka tany Montevideo izay nahasarika fanehoan-kevitra maro tamin'ny blaogy sy ny tambajotra sosialy.
Kamerona: Mipoitra Mialoha ny Fifidianana ny Nasionalisman'ny Mpiteny Anglisy
Afrika Mainty08 Oktobra 2011
Tahaka ny maha-anatin'ny fampielezankevitra fifidianana amin'ny 9 Oktobra 2011 izao, fifidianana ho filoha any Kamerona, niezaka nanao hetsika tao Buea renivohitr'i Kamerona Atsimo nozanahin'ny Anglisy taloha ny mpanohana ny hetsika mpisintaka sy mpiteny anglisy tamin'ny voalohany oktobra teo.
Afrika Mainty07 Oktobra 2011
Ny Alahady 9 oktobra ho avy izao, fanineniny eo amin'ny tantaran-dry zareo no antsoina daholo ireo Kamerone rehetra mba hifidy izay ho filohan'ny repoblikany. Fifidianana iray hiavaka noho ny hamaroan'ny mpirotsaka ho fidiana ary ny mpifidy, maherin'ny 7 tapitrisa, na izay ao Kamerona ihany, na any ivelany, ary ireo fanontaniana...